‘गुटबन्दी र व्यक्तिवादी चरित्रको अन्त्यका लागि मेरो उम्मेदवारी’ : नगर सभापतिका उम्मेदवार सुसेली - Nayabulanda.com
नयाँ बुलन्द ४ आश्विन २०७८, सोमबार १८:१७ 765 पटक हेरिएको
राणा शासनको अन्त्य गर्दै मूलकमा लोकतन्त्रकालागि अनवरत संघर्ष गरिरहको नेपाली काँग्रेस यति बेला १४ महाधिवेशमा होमिएको छ । मूलुकभर यो महाधिवेशन लोकतन्त्रवादीहरुकालागि नेतृत्व विकास र आगामी राजनीतिक भविश्यकालागि गतिलो अवसरको रुपमा पनि हेरिएको छ । यसै क्रममा धेरै स्थानमा वडा अधिवेशन सकिएका छन् । निर्धारित कार्यतालिकामा फेर वदलपछि भदौ २७ गते हुने भनिएको पालिकाको अधिवेशन असोज ९ गतेलाई सरेको छ । यो अधिवेशनकालागि इलामका १० पालिकामा नै अहिले तिव्र तयारी भइरहेको छ । सवै क्षेत्रमा एउटै पदमा विभिन्न व्यक्तिहरुले उम्मेद्वारी घोषणा गरिरहेका छन् । विगत जस्तै यो पटक पनि नेपाली काँग्रेसमा गुटगत वहस तिव्ररुपमा अघि बढेको छ । यो पटक सकृय पत्रकारिता गरिरहेका अग्रज पत्रकारहरु पनि चुनावी मैदानमा छन् । इलामको पत्रकारितामा लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्दै ३१ वर्षदेखि पत्रकारिता गरेका सोमनाथ अधिकारी (सुसेली) पनि इलाम नगरपालिकाको नगर सभापतीकालागि चर्चामा छन् । जिल्लामा देखिएका विभिन्न गुटभन्दा फरक ढंगले उम्मेद्वारी घोषणा गरेको दावी गर्ने सुसेलीसँग नयाँ बुलन्द टिमले गरेको कुराकानी ।
नयाँ बुलन्द : सक्रिय पत्रकारिता गर्दा गर्दै तपाईको पार्टीमा उम्मेद्वारी किन ?
सुसेली : २०४८ सालदेखि सकृय पत्रकारिता गर्दै आएको हु । ३१ वर्षे पत्रकारिताको अनुभव सँगालिसकेको छु । यो अवधीमा पत्रकारितावाट सिकेका सकारात्मक र समाजरुपान्तरणकोलागि सञ्चार क्षेत्रवाट खेलेको भूमिकालाई अव नयाँ वाटो तय गर्दै राजनीति तर्फ पनि सेवा गर्ने मनशाय जागेको हुँनाले यो १४ औं अधिवेशनमा इलाम नगरपालिकाको नगर सभापति पदकोलागि उम्मेद्वारी घोषणा गरेको हुँ ।
नयाँ बुलन्द : जिल्लामा विभिन्न गुटका उमेद्वारले मत मागि रहेका छन् । तपाईले आफूलाई स्वतन्त्र दावी गर्नु हुन्छ, कसरी ?
सुसेली : नगर सभापति उम्मेदवारी घोषणा गदै गर्दा नेपाली काँग्रेस पार्टी भित्र देखिएको आफ्नो संगठनलाई मजवुत वनाउने भन्दा पनि व्यक्ति मजवुत हुने तर्फ प्रतिष्पर्धा बढेको म आफुले देखें । र यो चाहि मेरो लागि मात्र नभएर आम प्रजातन्त्रवादी नेता, कार्यकर्ता र सर्व साधरणहरुको असन्तुष्टी सडकमा पोखिएको मैले पाएको छु । त्यसै कारणले नेपाली काँगे्रसलाई इलाम नगर क्षेत्रभित्र सडकमा छरिएका आवाजहरुलाई गोलवद्ध गर्दै पार्टी एकतालाई मजवुत वनाएर सवल र सक्षम पार्टीकोरुपमा स्थापित गर्ने उत्कट चाहना सहित विगतमा सिकेका एकताका अभ्यासहरुलाई त्यहाँभित्र प्रयोग गर्ने लक्ष लिएको छु ।
नयाँ बुलन्द : अहिले तपाईले मत मागिरहँदा पार्टीमा कृयाशिल रहेको आधार कसरी पेश गरिरहनु भएको छ ? मददाताको अधिकार बोकेका क्षेत्रीय प्रतिनिधिको धारणा तपाईको उम्मेद्वारी प्रति कस्तो पाउनु भयो ?
सुसेली : नेपाली राजनीतिलाई २०३६ सालदेखि नै १३ वर्षको उमेर रहँदै राजनीतिक छाप परिसकेको थियो । सोहि बेलादेखि नै अग्रजहरुको कुराकानी सुन्ने गर्थे र त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्थे । उति बेला पञ्चायती शासक एकातिर थिए भने प्रजातन्त्रवादी र प्रगतीशिल समूहहरुको अर्कोतर्फ थिए । हाम्रो उमेर समूहका धेरै साथीहरु प्रगतीशिल धारतर्फ मोडिन थालेका थियौं । हामीले क्रमश प्रगतीशिल धारलाई सममातेर राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिन थाल्यौं । यहि तवरले २०४५ सालमा नेकपामा मालेमा आवद्ध भएर पञ्चायती शासकहरुको दबदावाको विरुद्ध इलामको पूर्वी क्षेत्रका गाउँहरुमा रातारात प्रचारमा निस्कने गरेका थियौं । सोहि वेला प्रगतीशिल धारप्रति हाम्रा केहि असन्तुष्टिहरु हुन थाले । त्यो धारले उग्ररुप लिएपछि हामी करिव ४० जना यूवाहरु त्यो धार छोडेर लोकतान्त्रिक धारतर्फ मोडियौं । मेरो नेपाली काँग्रेसको यात्रा त्यहीवाट सुरु भएको हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा मेरो आफ्नो जन्मगाउँ साविक नाम्सालिङ क्षेत्र र आशपासका गाउँमा पञ्चायती शासनका विरुद्ध पोष्टर, कालो झन्डालगायत राख्दै सर्व साधरणलाई चेताना विस्तार गर्ने क्रममा लाग्यौं । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका अग्रजहरुसँग आवद्धता वढ्दै गएपछि म सदरमुकामसँग मेरो हिमखिम बढिसकेको थियो । सदरमुकाम प्रवेश गर्दै गर्दा पञ्चायती शासकहरुले अराष्ट्रिय तत्व भन्दै हाम्रो नाम प्रशासनमा पुगिसेको रहेछ । यो जानकारी अनुसन्धानका एक कर्मचारीवाट नै हामीले प्राप्त गर्यौ । यसपछि पञ्चायतप्रति थप आत्रोशित वन्दै प्रजातन्त्र स्थापनाकालागि सकृयता बढायौं । ४६ जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र नेपाली काँग्रेसमा सकृय ढंगले पार्टीका विभिन्न गतिविधिहरुमा संलग्न हुँदै अघि बढियो । प्रजातन्त्रलाई मजुवुत वनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अग्रणी रहेको मैले बुझिसकेको थिएँ र सोहि समयदेखि सकृय पत्रकारितामा कृयाशिल रहें । विभिन्न स्थानीय र राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा समाचार सम्प्रेशण गर्ने देखि तत्कालिन पत्रकार संघको संस्थापक सचिव र पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको नेतृत्व २ पटक सम्हाले । यहि अवधीमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा जिल्लामा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहि जनआन्दोलनभर सकृय सहभागिता रहेको थियो । यस अघि पार्टीका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा सकृय सहभागिता जनाउदै सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा सर्वसाधरण नागरिकदेखि राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई द्वन्दरत दुवै पक्षवाट सुरक्षित राख्न निरन्तर पहल गरियो । मूलुक संघीय संरचनामा गएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ १ नं. प्रदेशको उपाध्यक्षमा समेत निर्वाचित वनेर सञ्चार क्षेत्रको माध्यमले सिंगो लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई थप मजवुत वनाउने क्रममा सहयोग गर्ने क्रम निरन्तर रहयो । पत्रकारिता गरिरहँदा पनि नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनमा लामो समयसम्म आवद्ध रहेर नेपाली काँग्रेसका मूल्य मान्यतालाई स्थानीयवासीसम्म पुर्याउन निरन्तर प्रयास जारी राखें । नयाँसंविधान कार्यन्वयन भएपछि भएका तीनै तहका निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति अन्तर्गत रहेर पार्टीको निर्वाचनमा प्रचार प्रसार समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेको छु ।
नयाँ बुलन्द : तपाईलाई यो अधिवेशनमा जिताउनै पर्ने प्रमुख कारण के हो ? तपाईले जितेपछि पार्टीमा पहिलो पटक नयाँ के कार्यक्रम गर्नु हुन्छ ?
सुसेलीः मलाई जिताउने पर्ने कारणहरु धेरै छन् । किन भने लामो समयसम्म पत्रकारितासँगै पार्टीका विभिन्न गतिविधिहरुलाई सक्रियतापूर्वक पाएका जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक मैले सम्पन्न गरेको छु । त्यस्तै गरी पार्टीभित्र पछिल्लो समयमा देखिएको चरम गुटवन्दी र निषेधको राजनीति साथै घात अन्र्तघातको शिकारमा परेको काँग्रेसलाई सिंगो नेपाली काँग्रेस वनाउन मेरो महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । यसका अलावा पार्टीको न जिल्ला कमिटी, न क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटिहरुसँगै पार्टीका भात्रीसँगठनका नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर पार्टीका विभिन्न विषयका छलफलहरु अगाडी बढाएको मैले पाइन । संगठन वृद्धि हुनु पर्नेमा थप कम्जोर हुँदै गएको छ । त्यसलाई मजवुत वनाउन र सवै अग्रज नेता, कार्यकर्ता र पार्टीमा आवद्ध सवैलाई एकै ठाउँमा गोलवद्ध गरि संगठनलाई चुस्त दुरुस्तसँगै सवल र सक्षम वनाइ संगठित गर्ने मेरो प्रमुख उदेश्य हो । त्यसैले मेरो उम्मेदवारी नगर सभापतिवाट सुरु गरेको छु । किनभने सदरमुकामको नगरपालिकावाट सकारात्मक सन्देश जिल्लाका दशै तहमा सहज ढंगले पुर्याउन सजिलो हुने हुनाले मैला यो ठाउँ रोजेको हुँ । गुटवन्दी र व्यक्तिवादी चरित्रको अन्त्य, अग्रज नेताहरुले गरेका कामको सम्मान र उहाँहरुको सुझाव साथै समकालिन पुस्ताको साथ र सहयोग, यूवा पुस्ताहरुलाई अवसर प्रदान गर्दै संगठितगरि पार्टी प्रति आर्कषण बढाउन मेरो उम्मेद्वारी हो ।
नयाँ बुलन्द : पार्टी गुटगत शैलीले अस्तव्यस्त भएको भन्नु भयो यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ?
सुसेली : नेपाली काँग्रेस सिद्धान्तवाट पनि विचलित भएको पाइन्छ । जननायक विपी कोइरालाले प्रतिवादन गर्नु भएको सिद्धान्त निष्ठा र समाजवादको गोरेटोतर्फ लाग्ने भन्दा पनि यस अघि मैले भने जस्तो व्यक्तिवादी प्रवित्ती हावी भएको छ । हामीले काँग्रेसको नीति, सिद्धान्त र आर्दशलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न सकेको अहिलेको जस्तो बेथितीवाट पार्टीलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने मेरो निश्कर्ष हो ।